Khilaaf ka taagan xilka qaadistii agaasimihii hay’adda batroolka Soomaaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Khilaaf ka taagan xilka qaadistii agaasimihii hay’adda batroolka Soomaaliya
Kadib markii golaha wasiirrada ee xukuumadda Soomaaliya ay xilkii ka qaadeen agaasimihii hay’adda batroolka Soomaaliya Ibraahim Cali Xuseen, isla markaana hey’adaas loo magacaabay agaasime cusub ayaa waxaa soo baxaya khilaaf xoog leh iyo is qabqabsi ka dhex jira hay’adda.
Saacada un kadib ayaa xilka qadista lagu sameeyay waxaa kasoo horjeestay guddoomiyihii hey,adda batroolka Qaranka Ibraahim Cali Xuseen.
Hadaba arrintaasi iyadoo ay jirto ayaa xarunta Villa Hargeysa waxaa kulan ku yeeshay guddiga kheyraadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoomiyihii hey’adda batroolka ee xil ka qaadista lagu sameeyay kasoo horjeestay.
Kulankaan oo uu shir guddoominayay Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Cali oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga ahna ku simaha guddoomiyaha ayaa diirrada lagu saaray sababaha keenay xilka qaadista iyo khilaaf la sheegay inuu ka dhex aloolsanyahay wasaaradda batroolka dhexdeeda.
Khilaafka ayaa salka ku haya arrimaha maaliyadda ee hey’adda batroolka, kaas oo la sheegay in ay maamulayso wasaaradda batroolka markiisii horena ahaa mid ka madax-bannaan.
Waxyaabaha khilaafka sii murjiyay ayaa waxaa kamid ah cidda soo geleysa qandaraasyada la xiriira shati bixinta baarista shidaalka Soomaaliya, kaas oo caadiyan ay masuul ka tahay hey’adda batroolka.
Wararka ayaa intaas ku daraya in wasiirka wasaaradda batroolka Soomaaliya mudadii 4-ta sano aheyd ee uu xilka hayey uu shaqaale badan ka eryay wasaaradda, kuwaas oo qeybtooda lagu sheegay in ay yihiin khuburo ku xeel dheer arrimaha macdanta iyo batroolka.
Khuburada la eryay ayaa kala ah.
1-Jamaal Qaasim Mursal xoghayihii joogtada ahaa ee wasaaradda batroolka.
2-Karar Shukri Doomeey agaasimihii guud ee wasaaradda batroolka.
3-Dr. Cabdullahi Xaydar madaxii nidaaminta ee wasaaradda.
4-Eng Cabdulqaadir Abiikar m
Madaxii farsamada ee wasaaradda.
5-Abuukaate Tahliil madaxii waaxda sharciyada ee wasaaradda.
6-Ibraahim Cali Xuseen agaasimihii hey,adda batroolka iyo xubno kale.
Guddiga kheyraadka ayaa la tilmaamay in ay doonayaan xal ka gaaridda khilaafka taagan, maadaama ay yihiin guddiga kala shaqeeya golaha shacabka wadaaradda batroolka Soomaaliya.
Guddiga ayaa maalmaha soo aaddan ayaa waxa ay la kulmayaan wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Axmed Maxamed.
Previous articleBarakac xalay ka bilaawday Degmada Raaga-ceelle ee gobalka Shabeelada dhexe
Next articleMuhaajiriin laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya
Wararka ka imaanaya caawa Muqdisho gaar ahaan Degmada H/wadaag ayaa sheegaya in goor dhawayd oo caawa ah Ciidammo ka amar-qaata guddoomiyaha Degmada Dayniile Jacfar...
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka iyo Amisom oo wacad ku maray in...
Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage oo soo saaray warbixin uu cinwaan...